Heat cramps (အပူကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Heat cramps (အပူကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Heat cramps (အပူကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်း)
Heat cramps (အပူကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အပူကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်းသည် ခဏတာ ကြွက်သားနာကျင်မှုဖြစ်ပြီး ကြွက်သားများ သူ့အလိုလို တောင့်တင်းလာခြင်း၊ တဆတ်ဆတ်လှုပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်နေစဉ် ပူပြင်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်နေစဉ် နှင့် နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် ဖြစ်နိုင်သည်။
အပြင်းအထန် အလုပ်လုပ်ရသော ကြွက်သားများဖြစ်သည့် ခြေသလုံး၊ပေါင်နှင့် ပုခုံးတို့တွင် ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
Heat cramps (အပူကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
တိုတောင်းသော၊ ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်သော၊ သူ့အလိုလိုဖြစ်၍ အလိုလိုပျောက်သွားတတ်သော ကြွက်သားနာကျင်မှု ဖြစ်သည်။
အပူကြောင့် ကြွက်တက်သည့်နာကျင်မှုသည် အနားယူခြင်းနှင့် ရေနှင့် ဓါတ်ဆားများသောက်သုံးခြင်းတို့ အပြီးတွင် မသက်သာလျှင် ဆေးကုသမှု ခံယူရန်လိုသည်။
ပျို့အန်နေခြင်းကြောင့် ရေလုံလောက်စွာ မသောက်နိုင်လျှင် အကြောဆေးသွင်း၍ ရေဓါတ်ဖြည့်ရန် လိုနိုင်သည်။
အပူဒါဏ်ကြောင့် သတိလစ်မေ့မျောခြင်း ဖြစ်လျှင်
အပူဒါဏ်ကြောင့် မူးဝေခြင်း၊ နုံးချိခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ အသက်ရှူမဝခြင်း၊ ကိုယ်အပူချိန်တက်ခြင်း (၁၀၄ဒီဂရီကျော်လျှင်) တို့တွင် ချက်ခြင်းဆေးကုသမှု ခံယူသင့်သည်။
Heat cramps (အပူကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
တိကျသော အကြောင်းရင်းမှန်ကို မသိသေးပါ။ ဆိုဒီယမ်၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်စသည့် အရေးကြီးသော ဆားဓါတ်များ ဆုံးရှူံးခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုဆားဓါတ်များသည် ကြွက်သားများ၏ ဓါတ်ပြုမှုများတွင် ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့ မညီမျှမှုကြောင့် ပြဿနာဖြစ်နိုင်သည်။
ချွေးတွင် ဆိုဒီယမ်အများအပြားပါဝင်ပြီး ဆိုဒီယမ်ပါဝင်မှု မလုံလောက်သော အရည်များကို သောက်ခြင်းဖြင့် ဆိုးရွားသော သွေးတွင်းဆိုဒီယမ်နည်းသည့် အခြေအနေဖြစ်နိုင်သည်။ အချို့စက်ရုံများတွင် အလုပ်သမားများကို ဆားဓါတ်ကြွယ်ဝသော အစာများကျွေးခြင်းဖြင့် ကြွက်တက်ခြင်းလုံးဝမဖြစ်အောင် စီစဉ်ထားသည်။
Heat cramps (အပူကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု မြင့်တက်စေသည့် အကြောင်းအရင်းများ
မွေးကင်းစနှင့် ကလေးများတွင် အပူကို ရှောင်ရန်၊ သင့်တော်သော အဝတ်ဝတ်ရန် နှင့် အရည် အလုံအလောက် သောက်ရရန် သူတပါးကို မှီခိုရသောကြောင့် (မွေးကင်းစကလေးများကို အနှီးဖြင့် ကြပ်ကြပ်ထုပ်ခြင်းသည် ချွေးများအငွေ့ပျံရန် လိုအပ်သော အရေပြားပေါ်လေထိခြင်းကို ကာထားစေသဖြင့် ရှောင်ကြဉ်ရမည်။)
နှလုံးရောဂါ၊ အဆုတ်ရောဂါ စသည်တို့ရှိသော သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်လွယ်သည်။
တစ်ဦးတည်းသီးသန့်နေသူများ၊ လေအေးပေးရန် မတတ်နိုင်သူများသည် အပူဒါဏ်ကို ပိုခံရနိုင်သည်။
ချွေးထွက်ခြင်းနှင့် ခန္ဓါကိုယ်အပူချိန် ထိန်းညှိခြင်းကို ထိခိုက်စေသောဆေးများ ဥပမာ စိတ်ရောဂါအတွက် ဆရာဝန်ပေးသောဆေးများ၊ စိတ်ငြိမ်ဆေးများ၊ အလွယ်တကူ ဝယ်သောက်နိုင်သော အဖျားကျဆေးများ
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ချွေးထွက်များနေချိန်တွင် ဆားဓါတ်မပါသော ရေနှင့် အရည်အများအပြားသောက်သုံးခြင်း နှင့်
ပူပြင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလေ့အကျင့်မရှိသေးဘဲ အလုပ်စလုပ်ကာစ ရက်ပိုင်းတွင် အပူကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်း ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
Heat cramps (အပူကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါရာဇဝင်မေးခြင်းဖြင့် သိနိုင်သည်။ ကြွက်တက်သည့် လူနာအလုပ်လုပ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း သိရန် အရေးကြီးသည်။
ဘယ်အချိန်မှာ စပြီး ကြွက်တက်လာသလဲ၊ ဘယ်ကြွက်သားမှာ ဖြစ်တာလဲ
ပူပြင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလုပ်လုပ်သော အလေ့အကျင့်ရှိ သလား
ရေအလုံအလောက် သောက်ရဲ့လား စသည်တို့ကို မေးရမည်။
ဆီးအရောင်သည်လည်း အရေးကြီးသည်။ ခန္ဓါကိုယ်ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်လာလျှင် ကျောက်ကပ်ကရေကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ပိုပျစ်သော၊ အနံ့ပြင်းသော၊ အဝါရောင်ရင့်ရင့်ဆီးကို ထုတ်ပေးသည်။ ခန္ဓါကိုယ်ရေဓါတ် အပြည့်အဝရှိလျှင် ဆီးအရောင်ကြည်သည်။
လူနာကိုစမ်းသပ်လျှင် အများအားဖြင့် ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်နေမည်။ ရေဓါတ် အပြည့်အဝပြန်မဖြည့်ရသေးလျှင် ကြွက်တက်သောနေရာကို ထိလျှင်နာနေပြီး လှုပ်ရှားလျှင်လည်းနာမည်။ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်သည့် လက္ခဏာများဖြစ်သည့် ပါးစပ်နှင့်လျှာခြောက်နေခြင်း၊ ချိုင်းကြားနှင့် ပေါင်ခြံတို့တွင် ချွေးမထွက်ခြင်း၊ ဆီးသွားနည်းလာခြင်းတို့ တွေ့ရမည်။ သွေးပေါင်ကျခြင်း၊ နှလုံးခုန်နှုန်းမြန်လာခြင်း တို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ လူနာ၏ မတ်တပ်ရပ်နေချိန် သွေးပေါင်ချိန်သည် လှဲနေချိန်ထက် အလွန်နည်းနေမည်။
Heat cramps (အပူကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆရာဝန်က သင့်ကို အပူကြောင့်ဖြစ်သည့် အခြားပိုပြင်းထန်သော ရောဂါများရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည့် အကြောဆေးများပေး၍ ရေဓါတ်ပြန်ဖြည့်ပေးမည်။
နေထိုင်မှုပုံစံ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများ
အေးသောနေရာတွင် အနားယူပြီး ဓါတ်ဆားပါသော အချိုရည်/ရေအေးအေးသောက်ပါ။
ရေတစ်လီတာတွင် အိမ်သုံးဆား လက်ဖက်ရည်တစ်ဇွန်း၏ ၁/၄မှ ၁/၂ ကိုရော၍ ကိုယ်တိုင်ဆားဖျော်ရည် ဖျော်နိုင်သည်။
ဆားဆေးပြားများသည် ဗိုက်အောင့်စေတတ်ပြီး လိုအပ်သည့် အရည်များကို ပြန်မဖြည့်ပေးနိုင်သဖြင့် မသုံးသင့်ပါ။
ပူပြင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အလေ့အကျင့်မရှိသေးဘဲ အလုပ်စလုပ်ကာစ ရက်ပိုင်းတွင် အပူကြောင့်ကြွက်တက်ခြင်းကို ခံစားရနိုင်သည်။ အလေ့အကျင့်ရသွားပြီး လိုအပ်သောအရည်ကို ပြန်သောက်ပေးပါက ထိုသို့ဖြစ်နိုင်ခြေ နည်းသွားလိမ့်မည်။
Heat cramps. https://www.webmd.com/fitness-exercise/heat-cramps#1. Accessed October 25, 2017
Heat cramps. https://www.medicinenet.com/heat_cramps/article.htm. Accessed October 25, 2017